Xildhibaanada Puntland oo riday golaha wasiirada iyo Gaas oo maalmo loo qabtay - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada Puntland oo riday golaha wasiirada iyo Gaas oo maalmo loo qabtay
Xildhibaanada Puntland oo riday golaha wasiirada iyo Gaas oo maalmo loo qabtay
Garoowe (Caasimada Online) – Kulan degdeg ah oo goordhow ka dhacay Magaalada Garowe, ayaa waxa ay Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland, si rasmi ah codka kalsoonida kala noqdeen Golaha Wasiirada maamulka Puntland.
Kulanka baarlamaanka waxaa xaadiray 57 mudane, waxaana codka kalsoonida kala laabtay 47 mudane, iyadoo ay ka aamuseen 9 xildhibaan, halka 1 xildhibaan uu kahor yimid.
Xildhibaanada ayaa Golaha Wasiirada Puntland si rasmi ah ugu codeeyay in la rido, waxa ayna ku eedeeyen wax qabad la’aan.
Xildhibaano kulanka kadib la hadlay Saxaafada ayaa sheegay in baarlamaanka uu Madaxweyne C/wali Gaas ka sugaayo inuu soo magacaabo wasiirro cusub.
Sidoo kale, Gudoonka Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa sheegay Madaxweyne Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas inuu haysto 21 Cisho uu ku soo magacaabayo Wasiiro cusub oo uu yeesho Maamulka Puntland.
Geesta kale, Madaxweyne C/wali Gaas ayaa lagu wadaa in goordhow uu qabto Shir Jaraa’id oo uu uga hadli doono go’aanka uu baarlamaanka ku riday Xukuumada.